तातो पम्प भएको पोर्टेबल एयर कन्डिशनर, २०२१ मा कुन रोज्ने?
यदि तपाईं आगोको कम जोखिम भएको वा बिभिन्न खतराहरू जस्तै इलेक्ट्रिक हीटरहरू भएको तताउने उपकरण खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं तातो पम्प संग पोर्टेबल एयर कंडीशनर। यी उपकरणहरू ३ गुणा बढी तताउन सक्षम छन् र कुनै प्रकारको खतरा छैन। यसमा कूलिङ प्रकार्य छ जसले अन्तरिक्षबाट तातो हावा लिन्छ र यसलाई चिसो पार्छ, त्यसपछि बाहिर निकाल्छ। यसमा अर्को मोड छ जसले उल्टो गर्छ। यसले कोठामा तातो हावा सोस्छ र यसलाई बाहिर पठाउन तापक्रम बढाउँछ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई देखाउन जाँदैछौं कि सबैभन्दा राम्रो पोर्टेबल तातो पम्प एयर कन्डिसनर कुन हो र तपाइँलाई के अनुरूप हुनुपर्छ।
तातो पम्पको साथ उत्तम पोर्टेबल एयर कंडीशनर
ओलम्पिया स्प्लेन्डिड ०१९२२... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
इन्फिनिटन एयर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०60। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
14000 BTU एयर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सेकोटेक एयर... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Daitsu 3NDA0088 Air... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
Midea - एयर ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	ओलम्पिया स्प्लेन्डिड ०१९२२...
मूल्य गुणस्तर	इन्फिनिटन एयर...
हाम्रो मनपर्ने	14000 BTU एयर...
Daitsu 3NDA0088 Air...
Midea - एयर ...
Cecotec बाष्पीकरण एयर कंडीशनर
यो एक बाष्पीकरण एयर कंडीशनर हो जसमा4प्रकार्यहरू छन्: चिसो, गर्मी, ionizer र फ्यान प्रकार्य। ऊर्जा बचत गर्न, यसको खपत कम गर्न इको मोड छ। यो चाँडै कोठा तताउन र चिसो गर्न सक्षम छ। यसमा भएको निस्पंदन प्रणालीको लागि धन्यवाद, यसले एलर्जीहरूसँग हावा बाहिर निकाल्नबाट जोगिन धुलो र कणहरू फिल्टर गर्न सक्षम छ।
Cecotec एयर कन्डिसनर ...
यसमा 12L सम्मको ठूलो पानी ट्याङ्की छ जुन यसलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको कार्य यसको गुणस्तर सुधार गर्न हावालाई आर्द्रीकरण गर्नु हो। यसले प्रोग्राम गर्न र यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन रिमोट कन्ट्रोल समावेश गर्दछ। एउटा फाइदा यो हो कि यसले कुनै पनि प्रकारको आवाज उत्पन्न गर्दैन।
Taurus AC 350 RVKT 3-in-1 पोर्टेबल एयर कन्डिसनर
यो मोडेलमा ताप र कूलिङ दुवैमा राम्रो अप्टिमाइजेसनको लागि ३ वटा अपरेटिङ मोडहरू छन्। सञ्चालन मोडहरू निम्नानुसार छन्: शीतलन, वेंटिलेशन र dehumidification। यो उपकरण यसको 3W पावरको लागि धन्यवाद छिट्टै गर्मी कम गर्न सक्षम हुनको लागि आदर्श हो। यो 30 वर्ग मीटर को आकार को कोठा छिट्टै चिसो गर्न सक्षम छ।
सबै कुरालाई थप सहज बनाउन, यसमा पाङ्ग्राहरू र बोक्ने ह्यान्डलहरू छन् ताकि यसलाई कुनै पनि कोठामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा रिमोट कन्ट्रोल र धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो टच कन्ट्रोल प्यानल छ। योसँग एक कुशल र पारिस्थितिक मोड छ जसले खपत कम गर्न र वातावरणमा कम प्रभावको ग्यारेन्टी गर्दछ।
यो मोडेलमा4फरक अपरेटिङ मोडहरू छन्: यसलाई चिसो, तातो, वातावरणको आर्द्रता कम गर्न र हावा चलाउन प्रयोग गरिन्छ। यसमा वातानुकूलित र तताउने सुविधा पनि छ। यसको अधिकतम पावर कूल मोडमा 1149W र तातो मोडमा 1271W छ। यो 25 वर्ग मीटर को आकार संग कोठा को लागी उपयुक्त छ।
यसमा 24 घण्टा र पाङ्ग्राहरू र बोक्ने ह्यान्डल प्रयोग गर्न सजिलोको लागि प्रोग्राम गर्न सक्षम हुने टाइमर छ। यसले अपरेशनको समयमा कुनै आवाज निकाल्दैन। 53-64db को मानहरू रेकर्ड गरिएको छ। रेफ्रिजरेन्ट ग्यास वातावरणका लागि स्वस्थकर हुने भएकाले यसले यसको असर कम गर्छ । यसमा ऊर्जा दक्षता पनि छ जसले हामीलाई बिजुलीको बिल बचत गर्न मद्दत गर्नेछ।
ओलम्पिया स्प्लेन्डिड 1922 01922
यो एक उपकरण हो जसले चिसो र तातो उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ पारंपरिक तापलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुन। यसमा कार्यसम्पादन अनुकूलन गर्न विभिन्न प्रकारका अपरेशनहरू छन्। यी मोडहरू निम्नानुसार छन्: कुलिङ, फ्यान, तताउने, रात्रि मोड, स्वचालित, टर्बो र डिह्युमिडिफायर।
ओलम्पिया स्प्लेन्डिड ०१९२२...
यो चाँडै र एकरूपता सम्पूर्ण कोठा चिसो गर्न सक्षम छ। यसमा कम वातावरणीय प्रभाव हुने ग्यास छ।
यो एक पोर्टेबल कन्डिसनर हो जसले तातो र चिसो दुवै मापन गर्न सक्छ। यसले आर्द्रता कम गर्न पनि मद्दत गर्छ। यसमा खपत कम गर्न र बिजुलीको बिलमा बचत गर्न ठूलो ऊर्जा दक्षताको साथ बचत प्रणाली छ। यसमा3फ्यान गति र3सञ्चालन मोडहरू छन्: वातानुकूलित दुबै तातो र चिसो, प्रशंसक र dehumidifier।
Orbegozo ADR 126 - एयर ...
यसमा बिल्ट-इन रिमोट कन्ट्रोल छ जसको साथ तपाईं कार्यहरू अझ सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। योसँग टाइमर पनि छ जसले तपाईंलाई यसको प्रदर्शन खपत अनुकूलन गर्न 24 घण्टा सम्म प्रोग्राम गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा एक पारिस्थितिक प्रशीतक छ जुन वातावरण र 1350W को चिसो र गर्मी को शक्ति संग सम्मान गर्दछ।
पोर्टेबल एयर कंडीशनर को लाभ
तातो पम्पको साथ प्रयोग गरिएको पोर्टेबल एयर कन्डिसनरले धेरै फाइदाहरू ल्याउन सक्छ। मुख्यहरू हेरौं:
कुनै पनि प्रकारको कोठामा प्रयोगको लागि यसलाई सजिलै सार्न मद्दत गर्दछ।
यसले तपाइँको बिजुली बिल बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
घरलाई उचित वातानुकूलित राख्न यो वर्षको कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ठूलो स्थापना आवश्यक छैन र यो सजिलै आफ्नो आवश्यकता समायोजित गर्न सकिन्छ।
यसको गुणस्तर यसको मूल्यको आधारमा उत्कृष्ट छ।
यो घर र अफिस भाडामा लिनेहरूका लागि उपयुक्त छ र यसलाई जुनसुकै बेला आफूसँगै लैजान सकिन्छ।
गर्मीमा चिसो र जाडोमा तातो
ती वातानुकूलितहरू जसले तातो पम्प समावेश गर्दछ, समावेश नगर्नेहरू भन्दा बढी शक्ति हुन्छ। यसको अतिरिक्त, यसमा केहि उच्च लाभहरू छन्। यद्यपि यी किटहरू केही महँगो हुन सक्छन्, बिजुली बिल घटाउँछ र उच्च ऊर्जा दक्षता छ। यो पनि थप्नु पर्छ कि तपाईलाई चिसो तातोको लागि दुई यन्त्रहरू आवश्यक पर्दैन, तर तपाईसँग यो एउटै यन्त्रमा हुनेछ।
उदाहरणका लागि, बिजुली चुलोले धेरै ऊर्जा खपत गर्छ किनभने तिनीहरूले गर्मी उत्पन्न गर्नुपर्छ। यद्यपि, यी उपकरणहरू रेफ्रिजरेटरहरू जस्तै काम गर्न जिम्मेवार छन्। तिनीहरूले यसलाई रूपान्तरण गर्न वातावरणमा अवस्थित तापलाई अवशोषित गर्छन्। तिनीहरूले तातो उत्पादन गर्नुपर्दैन, केवल यसलाई पम्प गर्नुहोस्। यस तरिकाले, तिनीहरूले खपत भन्दा बढी ऊर्जा परिवर्तन गर्न प्रबन्ध गर्छन्।
अर्को मुख्य फाइदा तिनीहरूले गर्न सक्छन् हावा फिल्टर गर्नुहोस् र भाइरस वा ब्याक्टेरियालाई प्रवेश गर्न नदिनुहोस्।
पोर्टेबल गर्मी पम्प एयर कंडीशनर कसरी छनौट गर्ने
तातो पम्पको साथ पोर्टेबल एयर कंडीशनर कसरी छनौट गर्ने भनेर जान्न, हामीले निम्न खण्डहरू हेर्नु पर्छ।
शीतलन शक्ति: तपाईं बस्ने क्षेत्रको हावापानीमा निर्भर गर्दै, यसलाई तातो भन्दा उच्च शीतल शक्ति चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं न्यानो गर्मी भएको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने, यो आवश्यक छ कि यसमा अधिक चिसो शक्ति छ।
गर्मी शक्ति: चिसो शक्तिको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ तर चिसो जाडो भएका ठाउँहरूमा।
Velocidad de ventilation: फ्यान गति सधैं ऊर्जा बचत गर्न समायोज्य हुनुपर्छ। यदि तपाइँ गति 1 को साथ कोठा चिसो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ खपत कम गर्दै हुनुहुन्छ।
शक्ति खपत: कुल ऊर्जा दक्षता आधारित छ। आदर्श रूपमा, यसले बिजुली बिलमा बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
आवाज: यदि हामी यसलाई रातभर प्रयोग गरेर छोड्न चाहन्छौं भने हामीले यसले गर्ने आवाजलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। एक धेरै ठूलो यन्त्र कष्टप्रद हुन सक्छ।
रिमोट कन्ट्रोल र टाइमर: तिनीहरू सामान्यतया ठूलो आरामको चर हुन्। रिमोट कन्ट्रोलको साथ तपाईले साइटबाट सार्न बिना नै यसलाई नियमन गर्न सक्नुहुन्छ र टाइमरको साथ तपाईले यसलाई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यो घर आउनु अघि काम गर्न थाल्छ र तपाईले कोठा तताउनुहुनेछ।
थर्मोस्टेट: यो आदर्श हो यदि हामी चाहान्छौं कि तापक्रमलाई हामी कोठा जस्तो बनाउन चाहन्छौं।
dehumidification प्रकार्य: कम भाइरस र ब्याक्टेरिया संकुचन गर्न वातावरणको आर्द्रता कम गर्न मद्दत गर्दछ।
के यो पोर्टेबल एयर कंडीशनर किन्न लायक छ?
तापनि पम्पको साथ पोर्टेबल एयर कन्डिशनरको खरिदले परम्परागतको 20% र 30% बीचको लागत बढाउन सक्छ, यो एक महान खरीद विकल्प हो। र यो हो कि तपाइँ एकल उपकरणमा दुई प्रकार्यहरू किन्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यसले बिजुली बिलमा 50% सम्म बचत गर्न मद्दत गर्दछ। र यो हो कि यो एयर कंडीशनिंगले चिसो हावालाई मात्र अवशोषित गर्दछ र यसलाई फेरि बाहिर निकाल्छ। यसले परम्परागत एयर कन्डिसनर जस्तै चिसो उत्पन्न गर्नु पर्दैन।
परम्परागत स्टोभले तातो उत्पन्न गर्न र अधिक शक्ति अवशोषित गर्नुपर्छ। यसले अन्ततः बिजुलीको बिलको मूल्यलाई असर गर्छ। तातो पम्पले घर बाहिरको तापक्रमको सीमा छ भनी खरिद गर्दा ध्यानमा राख्नुपर्छ। यदि सडकको हावा धेरै चिसो छ भने यसले भित्री भागलाई तातो गर्न सक्षम हुनेछैन।0र 10 डिग्री बीचको तापमानमा कुनै समस्या छैन। तर, तापक्रम -५ डिग्रीभन्दा तल झर्यो भने बाहिरको हावाको तापमा केही समस्या आउन सक्छ ।
परम्परागत स्टोभ विपरीत, यो उपकरण यसले घर बाहिरको तापलाई मात्र अवशोषित गर्छ। यदि बाहिरको तापक्रम धेरै कम छ भने, यो तातो निकाल्न र भित्र ढुवानी गर्न तपाईंलाई अझ गाह्रो हुनेछ। यहाँ उल्लेख गरिएको अघिल्लो बुँदालाई जोड दिनुपर्छ। हामी बस्ने क्षेत्रको हावापानी हामीलाई चाहिने ताप पम्पको साथ पोर्टेबल एयर कन्डिसनको मोडेल छनोट गर्न आवश्यक छ। न्यानो गर्मी क्षेत्रहरूमा, तपाईंलाई उच्च शीतल शक्ति भएको उपकरण चाहिन्छ। यसको विपरित, चिसो जाडो भएका ठाउँहरूमा, उच्च ताप शक्ति संग एक उपकरण आवश्यक हुनेछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन प्रकारको पोर्टेबल एयर कन्डिसनर तातो पम्पको साथ तपाईको लागि उत्तम छ।
1 तातो पम्पको साथ उत्तम पोर्टेबल एयर कंडीशनर
1.1 Cecotec बाष्पीकरण एयर कंडीशनर
1.2 Taurus AC 350 RVKT 3-in-1 पोर्टेबल एयर कन्डिसनर
1.4 ओलम्पिया स्प्लेन्डिड 1922 01922
2 पोर्टेबल एयर कंडीशनर को लाभ
3 गर्मीमा चिसो र जाडोमा तातो
4 पोर्टेबल गर्मी पम्प एयर कंडीशनर कसरी छनौट गर्ने
5 के यो पोर्टेबल एयर कंडीशनर किन्न लायक छ?
स्टोभ » तातो पम्प संग पोर्टेबल एयर कंडीशनर